Yiba Malunga Nathi-Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Ukusukela ngo-2007, iShenzhen Fumax Technology Co., Ltd. ibigxile ekuboniseni inkonzo yokwenziwa kwekhontrakthi kubathengi behlabathi.Isisombululo sethu sesitshixo sokumisa esinye sibandakanya ukufunwa kwezinto, ukwenziwa kwe-PCB, indibano yePCB, iplastiki/isakhiwo sebhokisi yentsimbi, i-sub-assembly ukugqiba iimveliso zendibano.Umgangatho uqinisekisiwe.
Ukongeza kwi-EMS, iFumax R&D inokunceda abathengi bayile iiprojekthi ezintsha ezahlukeneyo kwaye bajike izimvo zabo kwiimveliso zokwenyani.Iinkonzo zethu ze-R&D ezibandakanya uyilo lwemveliso entsha, uyilo lweskimu sombane, uyilo lwePCB, uyilo lomatshini, iiprototypes kunye nokuqhutywa kovavanyo kwimveliso enkulu.Siqeshe ngaphezu kwama-300 abasebenzi abaqeqeshwe ngokuphezulu abanobukhulu bomzi-mveliso ogubungela ummandla ongama-5,000 eskwere seemitha.
Iqela leFumax lizibophelele ekuhambiseni esona sisombululo silungileyo kubathengi bethu ukusuka kuvavanyo lwesampulu ukuya kwimveliso yebhetshi ephakathi.
Injongo yeFumax kukubonelela ngesisombululo sokhetho kwii-OEMs ezifuna uyilo olugqalileyo noluphendulayo kunye neqabane lokwenziwa kwemveliso yevolumu ephakathi, entsonkothileyo yemveliso ye-elektroniki.
Siphumelele kwaye sihlala sihlaziya zonke izatifikethi ezibandakanya i-ISO90001, i-CE, i-FCC, i-UL, i-ROHS, ukuqinisekisa ukuba iimveliso ezikumgangatho ophezulu.
UmThengi kuQala - Ukubonelela ngoyilo oluzinikeleyo noluyilayo kunye neenkonzo zokuvelisa ngokunyanisekileyo kubathengi bethu;ukubanika ithuba lokukhuphisana nokuguquguquka, itekhnoloji, ixesha lokuthengisa, kunye neendleko zizonke.
Ukwamkelwa njengeqabane elithembekileyo eliphuhlisa kwaye livelise iimveliso ezikumgangatho wehlabathi kubathengi bethu, ngelixa sivuza abasebenzi bethu kunye nabaninizabelo.
Ukwaneliseka komthengi, ukuguquguquka, ukunyaniseka, uxanduva, uMboneleli weSisombululo, uMsebenzi weQela.
Ibhodi yeSekethe eprintiweyo IFlex PC Odm PCba IRigidFlex Pcb IPcb Fabrication kunye neNdibano IPcb enamacala amabini